Raajii samiifi ardii madaala kanaan ilaalaa - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Raajii samiifi ardii madaala kanaan ilaalaa
Raajii samiifi ardii madaala kanaan ilaalaa
Wontoonni nu wojjiin ardii irra jiraatanii fi kanneen ardiin ala jiraatan waan danuudha. Irra jireessi ilma namaa jireenya isaa kan guyyaa guyyaa geggeeffachuudhaan alatti maaltu akka isa marseeru quba hinqabu- yoo saayinsistoota iccitii ardii fi samii (hewaa) keessa jiru barbaaduu fi qoratuu hujii godhatan ta’e malee. Isaanumtuu waahunda beekan, duruu cufa bira gayan jechuun hindanda’amu. Yaaliin gadifageenyaan waa beekuuf godhamu daran cimee itti fufeera waan ta’eef. Kometii irratti qorannaa eegaluun kanaaf ragaa tokko.
Waan arganii fi qoratan, saayinsistoonni jechuu kootii, bifa adda addaatiin nutti himuu fi nutti agarsiisuuf yaalaa turan. Ta’us waan raajii heddu, yeroo heddu, qorachuuf qofa osoo hintaane dubbisanii fi dhagayanii hubachuufuu dandeetti guddaa gaafatu kana nuti akka salphatti hubanneerra jechuun kan danda’amu hinfakkaatu. Kanaaf qorattoonni daandii waa qoratan akka nama hundaaf ifa ta’utti dhiheessuuf kan carraaqan.
Egaa yaaliin bu’aa qorannoo qorattootaa akka salphatti hawaasa biraan gayuuf godhamu itti fufeera. Madaalli [scale] waan xiqqoo hanga ‘Kuwantam fi Niyutiriinoo’ irraa eegalee hanga wantoota gurguddaa gaalaaksii keessa jiraniitti agarsiisuuf aggaammate qophaayeera. Madaalliin kuni wantoota kana dura oduudhaan dhageennu bifa fooyya’aa ta’een akka arginuu fi hubannu nudandeessisa.
Madaalicha bitaa mirgatti oofaa [scroll godhaa] ilaalaa. Gara bitaatti oofuun wantoota gurguddaa irraa gara xixiqaatti nama geessa- Kuwantamii fi Niyutiriinoo nutti agarsiisa. Gara mirgaatti oofuun ykn deemuun aduu bira ceesisee gara Hubilitti [Hubble] nu geessa.
As tuquudhaan MADAALICHA ilaalaa.
Previous articleTaphni viidiyoo dandeettii dafanii waabarachuu nama gonfachiisa
Next articleAmmas Perezidaantiin biyya Aafrikaa biroo du’uun isaa hinoolu jedha TB Joshuwaan